Burlington oo ah Magaalo Dib-u-Celin loogu Sameeyo Dhallinyarada
Xarunta Caddaaladda Bulshada ee Burlington waxay baareysaa waxa ay uga dhigan tahay Burlington inay noqoto "Magaalada Dib-u-Celinta Dhallinyarada." Magaalada Dib-u-Celinta Dhallinyarada (RCY) waa mid ka dhigeysa cilaaqaadyada ay la leedahay carruurteeda, dhallinyarteeda iyo dadka waaweynba hore iyo bartamaha. Waxay ballan-qaadday inay taageerto carruurta iyo dhallinyarada iyada oo loo marayo caqabadaha shucuureed, bulsho, dhaqan iyo dhaqaale ee dhaqan ahaan u horseeday ka-reebitaanka iyo ciqaabta, waxayna isku darsatay dhuumaha iskuulka ilaa iyo xabsiga. RCY, iskuulada, waaxaha magaalada, adeegyada bulshada iyo caafimaadka maskaxda, wakaaladaha aan macaash doonka ahayn, sharci fulinta, iyo maxkamadaha waxay balanqaadayaan bixinta caruurta, laga bilaabo markay yaryihiin, barnaamijyo dhaqan iyo karti dhaqan dhaqan karti leh, sida fadhiyada waalidnimada guriga, wareegyada qoyska, latalinta, daaweynta, khibradaha iyo barashada adeegga, iyo tababarka shaqada. Farriinta aasaasiga ah ee la gudbiyay ayaa ah “Adiga ayaa annaga noo khuseeya. Adiga ayaa iska leh halkan. Waxaan dooneynaa inaan kaa dhigno inaad qeyb ka tahay bulshadayada. ”
Dadaalkan waxaan ku qabaneynaa seddex tababar jaaliyadood qeybaha kala duwan ee Magaalada si loo caawiyo qof kasta oo daneynaya inuu horumariyo faham wanaagsan oo ku saabsan awoodda xiriirinta xiriirka ee dhammaan waxa aan sameyno.
Hadafkeenu waa inaan siino tababaro dhaqan celin dib u habeyn ah ururada adeega dhalinyarada ee daneynaya iyo la-hawlgalayaasha bulshada si ay gacan uga geystaan ​​wada-abuurka dhaqanno xoogan oo dhisidda bulshada ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sameyneynaa guddi hagitaan oo ka kooban ururada dhalinyarada iyo dhalinyarada u adeega oo ka kala yimid daafaha Magaalada si ay nooga caawiyaan dhismaha aragtidan dadka aan aadka u saameeyay natiijada.
Ma xiiseyneysaa inaad nagu soo biirto? Fadlan kala xiriir Virginia Litchfield vlitchfield@burlingtonvt.gov